Kuwedzera waya kemikari anchor bhaudhi Vagadziri , Suppliers - China Kuwedzera waya kemikari anchor bhaudhi Factory
Kemikari bhaudhi yakaita anchor bhaudhi yekuwedzera anchor bhaudhi
Chigadzirwa Tsanangudzo >>> Anchor bhoti inoreva zita rakajairika rezvese kumashure anchor zvikamu, zvine huwandu hwakasiyana. Inogona kukamurwa kuita simbi anchor bolt uye isiri-simbi anchor bolt zvinoenderana neyakasiyana mbichana. Zvinoenderana neakasiyana anchoring mechanism, yakakamurwa kuita yekuwedzera anchor bhaudhi, reaming anchor bhaudhi, bonding anchor bhaudhi, kongiri sikuru, kupfura mbambo, kongiri mbambo, etc Expansion bhaudhi chinhu chakakosha chine shinda chinobatanidza chinoshandiswa kugadzirisa pombi tsigiro / kurembera / bracket. ..
New chemical anchor
Chigadzirwa Tsanangudzo >>> Chemical anchor bolt isimbi yakakwirira-yakasimba anchor bolt ine vinyl resin seyakanyanya mbishi zvinhu, iyo yainzi kemikari drug bolt mukutanga. Kemikari anchor bolt rudzi rutsva rwe anchor bolt mushure mekuwedzera anchor bolt. Icho chikamu chinoumbwa chinoshandisa yakakosha makemikari adhesive kusungirira uye kugadzirisa screw mugomba rekuchera yekongiri substrate, kuitira kuti isimbise zvikamu zvakagadziriswa. Zvigadzirwa zvechigadzirwa: 1. Chemical chubhu kuumbwa: vinyl resin, quartz chikamu ...
Kabhoni simbi yakabatiswa bhaudhi yekuwedzera yekunze
Product Tsanangudzo >>> Zvishandiso simbi, Stainless simbi. Chishandiso chinoshandiswa zvakanyanya mukusimbisa kusungirira, senge simbi furemu, chimiro, mapaneru, pasi ndiro, bracket, muchina, danda, angle simbi, track, nezvimwewo, kudzika kwemukati kunogona kugadziridzwa zvichienderana nehupamhi hwakatarwa, uye nekuwedzera kwe kudzika kudzika, iyo tensile fracture simba inowedzerawo. Anchor ane shinda refu akakodzera kukwirisa madziro uye inorema cargo kugadzirisa. Chinangwa kuti b...
Stainless simbi yekuwedzera bhaudhi ine hoko sleeve
Product Description >>> Dia Size M6.5M8M10M12 Pedzisa ZINC PLATED, Black Oxide, galvanized, Zinc-Flake Coated, Chrome Material Stainless steel 201, 304, 317, Carbon Steel Type Kuwedzera Hook Measurement system Metric, Imperial (Inch) 304 Stainless Steel Sheep Ziso Kuwedzera Bolt Kuwedzera Hook Dhonza Kuputika Screw M6.5M8M10M12 Surface SS ruvara EProduct Zita Kuwedzera Chikumbiro Hook Main Material Zinc Alloy, Brass/ Copper, Carbon steel, Stainless ste...